Muuri News Network » SAWIRO:-Gabadhii ugu Horeysay ee Somali ah oo Ganacsi Cusub ka bilawday NEW YORK.
SAWIRO:-Gabadhii ugu Horeysay ee Somali ah oo Ganacsi Cusub ka bilawday NEW YORK.
Waxaa magalada New York ee dalka mareykanka laga furay maqaayadii ugu horeysay ee Soomaali ah. Maqaayadaan oo lagu magacaabo Safaari Somali Cuisine waxay ku taalaa xaafada Herlem ee magaalada New York. Waxaa laga helaa maqaayadaan dhamaan cunto soomalai oo kala duwan ayada oo dadka mareykanka ay aad u jecelaanayaan cuntada Soomaalida.
Cuntada laga helo Maqayadan waxaa ka mid ah baasto, suqaar, buskeeti, shaax Soomali iyo isbarmuuto. Milkilaha Maqaayada Muno Birjeer ayaa sheegtay in ay inta badan dadka ka cunteeyo maqayada ay yihiin ajaanib isla markaana jeclaaaday cuntada Soomaalida.
Mid ka mid ah dadka ka cuntooyoo maqaayadaan oo lagu magaacabo Adres Piedrahita ayaa sheegay in markii ugu horeysay oo u booqday maqayada ay ahayd markii igu horeysay oo uu cuno cunto soomali waxuuuna si aad ugu jeclaaday cuntada Soomaalia. Andress waxuu intaa sii raaciyay “cuntada aan ka cuney Safari waxay ka mid tahay cuntadii ugu macaaneed ee aan waligey cuney. Maba ka filineyn in cuntada Soomaaliya ay tahay cunto sidaa u macaan”.
In kastoo magaalada New York tahay magalada ugu wayn dalka mareykanka waa magaalo ay aad iyo aad ugu yaryihiin Soomaalida. Ma jiraan hal deegaan oo soomaali ku noolyihiin marka laga reebo hal ama laba meelo kala duwan ku nool sidaas darteed ma suurta galin ay helaan Soomaalida meel ay ku kulmaan. Hada markii la furey maqaayadaan waxay u suurta galeysan in dadka mareykanka ay bartaan cuntada soomaalida iyo dhaqanka.
Maqayadan ayaa cinwaakeedu yahahay 219 West 116th st, New York, NY 10026.